सहि उमेर सहि कदम
म मेरो सरिर देखेर दिक्क मान्छु मलिउ सबैले मोति भन्छन त्यसो भन्दा मलाई असधई पिडा महसुस हुन्छ मरु कि जस्तो लाग्छ मेरो सरिर चिटिक्क परेको बनाउन के गर्नु पर्ला ?
यौन सम्पर्क (Sexual relation) हुँदा शरीरमा के के हुन्छ ?
कुन उमेरमा यौन सम्पर्क राख्नु उचित हुन्छ ?
के किशोरकिशोरी अवस्थामा यौनसम्पर्क गर्नु जरुरी छ ?
यौन सम्पर्क गर्न चाहना किन हुन्छ ?
रमादेवी, बालविवाह र स्वास्थ्य -२
बालविवाहको दुषपरिणाम के के हुन्छन ?
मेरो दुई स्तनको आकार एकनासको छैन, दाहिने ठुलो छ यसले गर्दा मलाइ दिक्क लाग्छ ।- रेणु शिवाकोटी, दोलखा
के स्तनको आकार सानो वा ठूलो हुनाले केही फरक पर्छ ? - रश्मि चौधरी
रोकियो बालविवाह ! रित्तै फर्किए जन्ती, खेर गयो भोज
रमादेवी, बालविवाह र स्वास्थ्य
बाल बिबाह को बारेमा धर्म गुरुहरु के भन्छन ?
कति पटकसम्म हस्तमैथुन गर्नु राम्रो हुन्छ ? –सोभित गुरुङ
हस्तमैथुन (Masturbation) भनेको के हो ? के हस्तमैथुनले हानी गर्छ ? हस्तमैथुन गर्दा विर्य सकिंदैन ? – बिष्णु शर्मा
Night fall (स्वप्नदोष) भएर हैरान भयो । के यो रोग हो ? – सुन्दर चालिस
किन किशोरावस्थामा यौनसम्बन्धसम्बन्धी धेरै खुलदुली हुन्छ? -बिनोद लेप्चा
बच्चा जन्मनुभन्दा पहिले केटा वा केटी कसरी छुट्टिन्छ ?
जुम्ल्याहा बच्चा कसरी जन्मन्छन्?
गर्भवति भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? सानो उमेरमा गर्भवति भएमा कस्ता असरहरू हुन्छन् ?
एउटी महिला/ किशोरी कसरी गर्भवति हुन सक्छिन् ?
गर्भधारण भनेको के हो ?
निसेचन भनेको के हो ?
“पढेको मान्छेले थोरै समय काम गरेर धेरै पैसा कमाउन सक्छ, मैले पढिन”
बालविवाह गर्नु र गराउनु दुबै कानुनी अपराध हो – मन्त्री आशा कोइराला
केटा मान्छेको रौं किन उम्रिन्छ ? यसलाई स्थायीरूपमा हटाउन क गर्नुपर्ला ? हात(पाखुरा)मा आएको रौं हटाउदा असर गर्छ कि गर्दैन ? – सुजन
आइपिल (I-Pill)को प्रयोग गर्दा महिनावारी १५ दिनमै भयो । के यस्तो हुन्छ ? -– बिक्रम थापा
www. sahiumersahikadam. org शुभारम्भ भयो ।
महिनावारी हुनु भनेको के हो ?
किशोरीहरूमा कस्ता शारीरिक परिवर्तनहरू देखापर्दछन् ?
किशोरहरूमा कस्ता शारीरिक परिवर्तनहरू देखापर्दछन् ?
कम उमेरमा यौन सम्पर्क राख्न नुहने कारण के हो ?
यौन तथा प्रजनन अधिकार भनेको के हो ?
यौनहिंसा (Sexual Violence)भनेको के हो ?
यौनहिंसा कोबाट र कहाँ कहाँ हुन सक्दछ ?
यौनजन्य संक्रमण वा यौन प्रसारित संक्रमणभनेको के हो?
पुरुषत्व र नारीत्
महिनावारी हुँदा रगत कहाँबाट बग्दछ ?
महिनावारी हुँदा पेट दुख्ने आदि समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने?
पहिलो पटक महिनावारी हुँदा केके समस्या देखापर्न सक्दछन् ?
महिनावारी हुनु अगाडि कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् ?
वीर्य (Semen)भनेको के हो ?
सानो उमेरमा हुने विवाहका जोखिमहरू
जिज्ञासा र खुल्दुली
सही उमेर सही कदम
right age right steps
किशोरावस्था भनेको जोश, जाँगर र उत्साहले भरिएको जीवनको एउटा अवस्था हो । नयाँ कुरा सिक्न उत्सुक र सिकेको कुरा तुरुन्तै व्यवहारमा उतार्न खोज्ने उर्जनशील समय हो यो । यो समयमा शरीरका अङ्गहरूको बृद्धि र विकास जोडतोडले भैरहेको हुन्छ। यौनाङ्गहरू पूर्ण रूपमा विकास हुन थाल्दछन् । यौन हर्मोनहरू निस्कन थाल्छन् । ती हर्मोनहरूको कारण यौन चाहाना, जिज्ञासा र यौन क्रियाकलापमा सहभागी बन्ने जोश चल्छ ।
शरीरको वृद्धि विकाससँगै भएको यौनाङ्गहरूको बृद्धि विकास र मानसिक रूपमा आउने परिवर्तनहरूका कारण सोचाइमा आरोह अवरोह आइरहन्छन् । भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने चिन्तासँगै वर्तमानमा भैरहेको परिवर्तनलाई ठीक ढंगले विश्लेषण गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । पारिवारिक संस्कार, बुवा आमा भन्दा साथीभाईहरु प्यारा हुन्छन् । साथीहरूप्रति आकर्षित हुने, घुम्न जाने, यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन चाहनाको उत्कट इच्छा हुन्छ । आफ्नै यौनाङ्गहरू खेलाउदा आनन्द आउने हुन्छ । त्यसैले उनीहरू हस्तमैथुन गर्छन् ।
हस्तमैथुन गर्दा लिङ्गबाट वीर्य र यौनीबाट यौनीरस निस्कन्छ । वीर्य निस्कनु वा यौनीबाट चिप्लो पदार्थ निस्कनु भनेको यौनाङ्गहरू पूर्ण विकास भएको सकरात्मक संकेत हो । यौन क्रियाकलापमा भाग लिन सक्षम भएको प्रमाण हो । तर यसलाई सकरात्मक रूपमा लिन सक्ने ज्ञान र सीपको विकास हुनु जरुरी छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा हस्तमैथुन गर्नुलाई नकरात्मक रूपमा लिइन्छ । सामान्य रूपमा शरीरमा भैरहेको परिवर्तनलाई बुझ्न नसक्दा हस्तमैथुन प्रति भ्रम छ । पुर्वीय दर्शनमा हस्तमैथुनको बैज्ञानिकतालाई बुझ्न नसक्दा हस्तमैथुन गर्यो भने लिङ्ग बाङ्गो हुने, सन्तान उत्पादन क्षमता गुम्ने, दिमागको विकास नहुने जस्ता कुराहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर अहिलेसम्मको बैज्ञानिक अनुसन्धानले हस्तमैथुनको बेफाइदा देखाउन सकेको छैन । हस्तमैथुन सहज र आवश्यक यौन क्रियाकलाप हो । हस्तमैथुनसँग सम्वन्धित कुनै पनि भ्रममा पर्नु हुँदैन । आफुलाई इच्छा लागेको समय र अनुकुल अवस्थामा हस्तमैथुन गर्नुपर्छ । यसले असुरक्षित यौन सम्पर्क हुने संभावनालाई थोरै भएपनि कटौती गर्छ ।
किशोरावस्थामा आउने अनेकन परिवर्तनहरूको बारेमा पूर्ण र पूर्व जानकारी दिनु उत्तिकै महत्वपुर्ण छ । किशोरावस्थामा प्रवेश गर्नु अगावै त्यस अवस्थामा आउने परिवर्तन र तिनीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी सीप सिक्नु र सिकाउनु जरूरी छ । उदाहरणको लागि किशोरावस्थामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै केटीहरूमा महिनावारी (रजस्वला) शुरु हुन्छ । पहिलो महिनावारी सबैको लागि अनौठो हुन्छ । पिसाब मात्र आइरहेको योनीबाट अकस्तमात् रगत बग्न थाल्छ । लगाएको लुगाहरूमा रातो रगत लाग्छ । साथीहरूले देख्ने र जिस्काउने ठूलो डर हुन्छ । त्यति मात्रै हो र, यो के भएको हो भन्ने नै थाहा नहुन सक्छ । यसले किशोरीहरूमा सहन नसक्ने मानसिक तनाव सृजना हुन्छ । त्यसैले यस्तो परिवर्तनको बारेमा महिनावारी शुरु हुनु अगावै जानकारी दिने र महिनावारी हुँदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरूको बारेमा ज्ञान र सीप लिनु/दिनुपर्छ । आजकल महिनावारी हुने उमेर घट्दै गएको पाइन्छ । शारीरिक स्वस्थता र पोषणयुक्त खानेकुराहरूको उपलब्धता बढ्दै गएको कारण १०–११ वर्ष देखि नै महिनावारी शुरु हुन्छ । त्यसो हुँदा ८–९ वर्षको उमेर देखि नै रजस्वलासम्बन्धी ज्ञान र रजस्वला हुँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी लिनु/दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुभएकोमा धन्यवाद |
तपाईको इमेल गोप्य राखिनेछ !!